८० हजारमा स्कुटर
काठमाडौं , १० बैशाख । जापानी प्रविधिमा निर्मित टेरा मोटर्स, विद्युतिय २ पांग्रे र ३ पांग्रे सवारी साधनको लागि आधिकारिक बिक्रेता फेयर अटो प्रालिले आफ्नो नयाँ ई—स्कुटर ए–२००० नेपाली बजारमा ल्याएको छ । आकर्षक डिजाईन र स्टाइलमा निर्मित यस स्कुटर, ग्राहकहरुका लागि रातो, नीलो, सेतो रंगहरुमा उपलब्ध छ । सिटी राइडिंगको लागि उपयुक्त रहेको यस […]
एजेन्सी: अहिले विश्वभर ब्रोडब्याण्ड क्रान्तिको चर्चा चलिरहेको छ। तर, यही चर्चाबीच हामीले प्रयोग गर्ने डाटाबारे आफैंले सुइँको समेत पाउँदैनौं । आफ्नो स्मार्टफोन वा ट्याबलेटमा कति डाटाको प्रयोग गरिरहेका छौँ भन्ने हामीलाई याद नै हुन्न। साँचो कुरा के हो भने यदि तपाईँले आफ्नो मोबाइल या ट्याब्लेटको अवस्था राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने डाटा निकै कम देखिनन्छ। यदि तपाईँले […]
भाइबरले नयाँ वर्षको अवसरमा आफ्ना प्रयोगकर्ताहरुलाई निःशुल्क स्टिकर दिने
काठमाडौं ,२९ चैत । विश्वकै अग्रणी मेसेजिङ्ग एप भाइबरले नेपाली नयाँ वर्ष २०७३ को अवसरमा आफ्ना प्रयोगकर्ताहरुलाई निःशुल्क स्टिकर दिने भएको छ । भाइबरको विश्वभर ७११ मिलियनभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरु छन् । यो उत्सवमय अवसरमा भाइबरले ७ अप्रिलदेखि लागू हुने गरी आफ्नो ग्राहकहरुका लागि रु. १०,००० बराबरको आफ्ना ५० वटा भन्दा बढी स्टिकर प्याकहरु १० दिनको […]
अरुको वाईफाई पासवर्ड कसरी थाहा पाउने ?
एजेन्सी , २८ चैत । अहिलेको हाइटेक जमानामा सबैसँग स्मार्टफोन हुन्छ नै । स्मार्ट फोन भएपछि थ्री जी वा बाई-फाईबाट इन्टरनेट चलाउने कुरा कुनै नयाँ कुरा भएन । तर कहिले काँहि बाहिर निस्किँदा वा आफ्नो इन्टरनेटले काम नगर्दा नेट चलाउन नपाएर छटपटी हुने गर्छ । यस्तै अवस्थामा कसैको बाई-फाई पासवर्ड थाहा पाउन पाए ! पक्कै […]
हेलिकोप्टर भन्दा महङ्गो मोवाइल !
एजेन्सी । तपाईले कहिल्यै एउटा मोवाइल सेट हेलिकोप्टर भन्दा महंगो होला भनेर सोच्नुभएको छ ? सायद छैन होला । तर विश्वमा यति धेरै महंगा मोवाइल पनि छन्, जसलाई खरीद गर्नु मोवाइल सौखिनहरुको बसमा हुन्न । विश्वकै सबैभन्दा महंगो मोवाइलको मूल्य अमेरिकामा हेलिकोप्टरको उत्पादन गर्ने कम्पनी ‘बेल’को कयौं हेलिकोप्टरको मूल्य भन्दा ज्यादा छ । द रिचेस्ट […]
एप्पलले सानो आकारको आईफोन र आइप्याड प्रो ल्याउने
एप्पलले सानो आकारको आइफोन र आइप्याड प्रो चाँडै नै बजारमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । अमेरिकाको सन फ्रान्सिस्कोमा भएको एक विशेष कार्यक्रमका बिच एप्पलले सानो आकारको आइफोन एसइ र आप्याड प्रो चाँडै बजारमा ल्याउने घोषणा गरेको हो । सानो आकारको आइफोन एसइको प्रोसेसिङ र ग्राफिक्स परफमेन्स आइफोन सिक्स एसको जस्तै हुने एप्पलले दाबी गरेको छ […]
के के छन् ग्यालेक्सी एस ७ र ग्यालेक्सी ७ एजका विशेषता ?
कोरियन कम्पनी सामसुङले बहुप्रतिक्षित स्मार्टफोन ग्यालेक्सी एस ७ र ग्यालेक्सी एस ७ एज सार्वजनिक गरेको छ। स्पेनको बार्सिलोनामा आयोजित मोबाइल कङ्ग्रेस वर्ल्डमा यी दुई स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको हो। कम्पनीले यी स्मार्टफोनका पाँच विशेषता रहेको उल्लेख गरेको छ। जुन यसअघिको स्मार्टफोनमा नभएको कम्पनीको दाबी छ। सामसुङले यी दुबै स्मार्टफोनमा दुई सय जिबीसम्मको स्टोरेज गर्न मिल्ने बताएको […]
सामसुङ मोबाइलको पछिल्लो उत्पादन सार्वजनिक
काठमाडौं ,४ चैत । सामसुङ मोबाइलको पछिल्लो उत्पादन ‘ग्यालेक्सी एस–७ एज’ र ‘ग्यालेक्सी एस–७’ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरिएको छ । सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्स नेपालले बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरी सामसुङका यी नयाँ दुई मोडल सार्वजनिक गरेको हो । यी दुईओटै सेटमा पहिलोपटक ‘डुअल पिक्सल क्यमेरा’ प्रयोग भएको जनाइएको छ । ‘ग्यालेक्सी एस–७ एज’को स्थानीय बजार मूल्य […]
एप स्टोरको पपुलर एप्स मस्कुरेड (MSQRD)किन्यो
सामजिक संजाल फेसबुकले एप स्टोरको पपुलर एप्स मस्कुरेड (MSQRD) किनेको छ । यो एप्स खास गरि सेल्फी खिचेको तस्वीरलाई विभिन्न किसिमको तस्वीर बनाउन सकिने एप्स हो । यो एप्सबाट भिडियो पनि रेकर्ड पनि गर्न सकिन्छ र फोटोहरु विभिन्न सामाजिक संजालमा पोष्ट गर्न सकिन्छ । वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार फेसबुकले यस अघि स्न्याप च्याटलाई किन्न खोजेको थियो । स्न्याप […]
एन्टिभाइरस नराखी कम्युटर कसरी जोगाउने ?
भाइरसका कारण कम्प्युटरमा समस्या खेपिरहनु भएको छ भने केही सावधानी अपनाउँदा ती समस्यालाई टाढै राख्न सकिन्छ। खराब सफ्टवेयरलाई कम्प्युटरमा छिर्न रोक्न सक्ने हो भने कम्प्युटरमा एन्टिभाइरस नभए पनि केही असर पर्दैन। हामीले प्रयोग गर्ने सबै ब्राउजरमा सुरक्षाका उपायहरु समेटिएका हुन्छ जस्तो कि एन्टी फिसिङ फिल्टर। यस्ता फिचर उपयोग गर्नाले ठूला समस्या सजिलै समाधान हुन्छन्। यद्यपी […]